Nkuzi: Wụnye .tar.gz na .tar.bz2 nchịkọta | Site na Linux
Nkuzi: Wụnye .tar.gz na .tar.bz2
obi ike | | Aplicaciones, GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Na mbido mgbe anyị bidoro na Linux ma chọọ mmemme, ọ bụ ihe dị mma na anyị ga-achọta .deb ma ọ bụ .rpm na n'ọtụtụ ọnọdụ anyị na-ahụ mmemme na mgbati ahụ. .tar.gz y Ugboro abụọA na - ejikọ faịlụ ndị a ma na - enwekarị ntụziaka ịwụnye ya na mmemme ahụ.
Ntinye maka ụdị nchịkọta abụọ a bụ otu
Nke mbụ anyị ga-abanye na folda ebe anyị nwere faịlụ ahụ, ọ bụrụ na folda ahụ nwere ọtụtụ okwu, anyị ga-etinye ha na "" ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ naghị achọ folda na mkpụrụ okwu ọ bụla
CD ebe nchekwa file bụ CD "folda ebe file ahụ dị"
N'ime anyị, anyị na-emeghe faịlụ ahụ
Anyị na-eme (chịkọta)
Ugbu a wụnye
Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike inye anyị njehie na ./configure, n'ọnọdụ ahụ ọ chọghị mkpokọta yana yana ime anyị nwere ọtụtụ, na njedebe anyị na-eme
Ma ọ bụ anyị ike launcher.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Nkuzi: Wụnye .tar.gz na .tar.bz2
Ihe 102 kwuru, hapụ nke gị
mba, + 1
n'ezie ihe ziri ezi ka unzip bụ
tar -zxvf faịlụ.tar.gz
tar -jxvf faịlụ.tar.bz2
ma hazie enwere nhọrọ enweghi ngwụcha (dabere na ngwanrọ ahụ) iji hazie nwụnye
Na nke ahụ, ha ga-ahụ nhọrọ ndị ọzọ dị iche iche mgbe ị na-etinye mmemme.
Ọ bụghị nkesa niile na-eji / usr / mpaghara iji wụnye mmemme, a ghaghị ịkpọkwa ya.
I chefuru ikwuputa otu esi ewepu mmemme etinyegoro na uzo ahu. Na mgbakwunye na ịkọwapụta njikarịcha maka ọ bụla ije.
Ka o sina dị, ezigbo ụzọ mana ị tufuru ọtụtụ ihe… nke ukwuu ịkekọrịta.
Ọ bụ ihe m na-ejitụbeghị, ọtụtụ mmemme m hụrụ na nchekwa gọọmentị.
Eziokwu banyere nkụda mmụọ bụ na ọ dịlarị m mma otu a.
Edere m ya n'ihi na ọ na-ewute m ndị niile na-ekwu, "mgbe ị na-emeghe ya gụọ ntuziaka."
Ka o sina dị, m na-ahụ .tar.gz dị ka ihe ikpeazụ, ma ọ bụrụ na enweghị nke ụgwọ deb / rpm ma ọ bụ na nchekwa
"Eziokwu banyere decompressing bụ na ọ dịrịla m mma otu a."
anyị kwenyere, anaghị m agbagha nke ahụ, mana ọ pụtaghị na ọ bụ ihe ziri ezi ime. Ọ bụghị distros niile decompress "n'ikike", ụfọdụ ga - agbakwunye mpaghara ndị ọzọ.
Mmadu, obughi nkem si na enwere subnormal distros hahahaha
KISS nwoke ... KISS
Nwoke, KISS abụghị moron, ị maraworị nke ahụ na Slackware hahahaha
Ọ bụ ya mere m ji agwa gị nke ahụ
Dị mfe! = Mfe.
+1 maka nke kwesịrị
Otu ihe karịrị nke ọzọ. A "amamihe" ndị a abụghị isiokwu.
Ugboko 523 dijo
Ọ bụrụ na ị gbanwee "mee wụnye" na "checkinstall" (ịnwere ike iwunye ya na nghọta, ọ dị na nchekwa) ọ ga-etinye usoro ihe omume ahụ, kamakwa:
- Mepụta a .deb ka ị wee wụnye ya n'ọdịnihu
-Nrụnye omume ga-apụta na Synaptic, n'ihi ya, ị nwere ike mfe iwepụ ya si n'ebe
Ndị ọrụ ụgbọ mmiri etinyela aka na Aptitude ...
Ndo maka amaghi ihe m, mana ngwa ndi ozo na edozi nsogbu ndia?
Nope, n'ihi na ndị ọbịa na-arụ ọrụ na ngwugwu a chịkọtara na tar.gz ma ọ bụ tar.bz2 bụ faịlụ ejiri abịanye na koodu isi.
Gaghị enwe ike ime nkuzi na nke a, ọtụtụ oge, ma ọ dịkarịa ala, a na-achịkọta ngwugwu qt na ndị ọzọ, ọbụlagodi ụzọ dị egwu.
Kpọmkwem m ga-ekwu otu ihe ahụ.
Ndị na-eji qmake si Qt dị ka nke a:
M tinye okwu ọzọ nke bụ cmakes:
Ma obu enwere ndi ozo gha agba oso && sudo make install.
Ndị ahụ bụ okwu kachasị, mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ: s
E nwere oge ụfọdụ ngwa ụfọdụ emere na QT adịghị eweta anamfile. Yabụ na ọ bụ oge iji mepụta ha na ahịrị ndị a:
Ka anyị hụ ma m kọwaa, mgbe m ga-eji tar.gz ma ọ bụ tar.bz2 ihe niile m na-eme iji mepụta .deb ma ọ bụ all.deb site na iji ọbịa bụ itinye sudo ọbịa wụnye + ngwugwu aha. Nke ahụ ọ bụ otu ihe ahụ na mkpokọta?
Mba, ichikota na-agbanwe koodu nke usoro ihe omume a na koodu igwe.
Ebe ihe ị na-eme na mbịambịa na-emegharị ngwugwu nke na-agbanwe usoro ngwugwu nke otu nkesa na usoro ngwugwu nke nkesa ọzọ.
Iji mee ka ọ dịkwuo mfe, ọ dị ka a ga - asị na ị nwere faịlụ abịakọrọ na RAR ma ịchọrọ ịtụgharị ya na ZIP, ị ga - ehichapụ faịlụ ahụ na RAR wee pịa ya ọzọ na ZIP, nke ahụ bụ ihe ndị ọbịa na - eme.
Mkpokọta a na-eme ka, ọ bụghị hazi. Nhazi faịlụ ahụ bụ edemede na-ekwenye na sistemu ahụ na-akwado ihe niile dabere na ya iji chịkọta mmemme ahụ, wee mepụta faịlụ ahụ (nke bụ nke na-akọwa etu a ga-esi chịkọta ya) dịka sistemụ anyị.
Ugbu a, m na-ewepụ ya n'ihi na isiokwu a adịlarị ogologo oge site na mgbe m dere ya n'April ma ọ bụ Mee. Adịghị m elele ya ọ fọrọ nke nta wepụ ụfọdụ okwu ọjọọ ọ bụla ọzọ
Echere m na anaghị m akọwa onwe m nke ọma. Ọ bụghị naanị na onye ọhụụ gbanwere ngwungwu rpm ka ọ bụrụ .deb, ọ bụrụ na iwere koodu isi nke mmemme, ọ bụ gz, ma ọ bụ bz2 ọ na-agbanwe ya ka ọ bụrụ nrụnye nrụnye nke onwe. N'ihi ya ajụjụ m. Anọla m na Linux ruo obere oge, buru m.
ewepụ amaghị ihe m, mana usoro ndị a dịkwa ire na Chakra, ma ọ bụ ihe gbanwere ???
Ọ dịghị mmadụ ma ọlị 😀
Dị ka ndị dị otú a, usoro ndị a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkọlọtọ na distros niile, mana ọ bụghị 100% ijide n'aka na ndị a na-agbaso usoro ịgbaso. Ọ bụ ya mere m ji akwado ka ị gụọ faịlụ ntuziaka mgbe niile (GADỌ na-emekarị) tupu ịme ihe ọ bụla.
dị ka @ KZKG ^ Gaara na-ekwu, nke a abụghị mgbe niile, ọ bụ ọkọlọtọ ga-arụ ọrụ maka distros niile ma ọ bụrụhaala na edepụtara mmemme ahụ na C / C ++
Mgbe m chere otu n'ime ndị ahụ ihu .tar.gz, m ga-alaghachi n'isiokwu a. Lee ka m si kpọọ ụdị nchịkọta ndị ahụ asị!
Fuck ị tola afọ iji wụnye nchịkọta ndị a HAHAHAHAHA
Ndo maka enweghị m ihe ọmụma, usoro nwụnye a na-arụkwa ọrụ maka Debian. N'ihi na m na-anwale ma ana m anwa ma ọ na-enye m njehie.
Ọ bụ ya mere na ọ dịghị onye na-eji Linux, ime ihe ọ bụla nzuzu bụ aghụghọ
Zaghachi Laura Tejera
Kedu otu esi achọ ịmata ihe, ụfọdụ n'ime ihe nzuzu ndị ị kwuru, ndị "nwere nnukwu onyinye" nke Windows na OS X enweghị ike ịme ha, ma ọ bụ na-atụ ha ụjọ.
The na-akpa ọchị bụ otú ndị mmadụ dị ka gị nwere ike iso ndị dị otú ahụ a mechiri emechi OS.
You zere ịza ajụjụ ahụ? … Ndị ọrụ Windows ma ọ bụ OS X nwere ọgụgụ isi nwere ike iji sistemụ ha rụọ ọtụtụ ihe dịka anyị gosipụtara na saịtị a? 🙂
N'agbanyeghị, ị na-eji Ubuntu so kedu ihe anyị na-ekwu?
nọgidenụ mediocre manga
Anyị a na-achọkarị? Uff… LOL!
Anyi no n’afọ 2015!
Echere m na ọ dịghị mkpa ịhapụ oge dị ukwuu na-amụ ọrụ site na njikwa.
Gini na iji ngwa na akpaghị aka maka nke a?
N'ọnọdụ ọ bụla, ndị "masịrị" ide iwu site na njikwa ebe ahụ, ka ha gaa n'ihu na-eme ya, mana n 'ọ ga-adị mkpa ịnwe otu iwu ahụ akpaghị aka. Anaghị m arịọ gị ka izipu rọketi na ọnwa.
Ihe kpatara iji sọftụwia na-akwụghị ụgwọ bụ ụkpụrụ omume. Ekwela ka onye ọ bụla gbochie nnwere onwe ya nke mmadụ
Zaghachi santiago luis bazan
Eziokwu na sanata nke "nnwere onwe" na mmemme m erijuola afọ. Ha enweghị ike ịkwụsị ito chi na-adịghị adị ma dịrịkwa umeala n’obi karị.
Ikwuru eziokwu Laura, ụmụ okorobịa a na Linux na-eme ka ọkpụkpụ ahụ sie ike. Na put0 windo ihe dị mfe. Anaghị m eleda Linux mana ọ nweghị ike ịbụ na ịwụnye pel0tudes ọ bụla ị na-eji ọtụtụ awa na awa na-enyocha etu tar si arụ ọrụ na meresunda niile ka na njedebe nke ụbọchị ị ga-arapara na "Linux onye mbido ...".
Achọrọ m iji sistemụ kwụsiri ike mana ịghara iwepụ ọtụtụ awa na mmepụta m n'ihi na m ga-arụ ọrụ, enweghị m ọchịchọ ịghọ "onye gụsịrị akwụkwọ na Linux".
Ihe na - efu mgbe obula ... mgbe m nyere. / Hazie m na - enweta: hazi: njehie: intltool gị emeela agadi. Int chọrọ intltool 0.35.0 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
N'ikpeazụ, ntụziaka ahụ na-alaghachi: Enweghị nkọwa akọwapụtara na enweghị profaịlụ ọ hụrụ. Elu.
ka awụnyere: Enweghị iwu iji wuo `` ntinye awụnyere
Abụ m onye ọhụụ ma ọ dị mma ịme nyocha iji mụta, mana FUCK, ị gaghị enwe ike ịkọwa ya na obere pebbles maka anyị bụ ndị ọhụrụ na Linux?
Thanatos Enwere m nsogbu yiri nke ahụ ma ana m ekerịta nsonaazụ m:
(Nke mbụ iji dokwuo anya na m bụkwa onye neophyte na ụwa Linux na ihe omimi m na gburugburu a na "ekpomeekpo" (distro) ruo Ubuntu bụ otu izu).
Anya isi na ọ abatakwa m nchekwa «Downloads» na iwu «cd» ebe m ngwugwu nke usoro ihe omume «SoulSeek» na-agwụ «.tgz» na ọnụ ma ọ bụ njikwa na-hụrụ:
"./Configure" nyere m njehie na faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị adị
"Mee" tụbara m otu njehie dị ka gị ... ya mere anaghị m aga n'ihu na iwu "sudo make install" (sudo bụ n'ihi na Ubuntu chọrọ "Super User na paswọọdụ ya" iji mee iwu a, na okwu ndị ọzọ mee nwụnye) .
N’inyocha faịlụ ahụ akpatabeghị, achọpụtara m na ihe nwere ike ịdakwasị gị na nke ahụ bụ na unzipped file bụ ụdị “executable file” (nri pịa- Njirimara) na o were 2 clicks igbu ya.
Nsogbu gị na «./configure» nwere ike idozi ya na mmelite nke nchịkọta ma ọ bụ repositories (okwu ndị a na-emegharị m ntakịrị) arụnyere na Distro gị, ebe ọ na-agwa gị na «intItooI» emeela ochie ma ịchọrọ nke ọhụrụ ma echere m na ma eleghị anya, ngwugwu a bụ nke na-achịkọta gị distro. Na Ubuntu ị mee ya n'otu ọnụ site na ịpị "sudo apt-get update" ma melite nchịkọta niile na sistemụ ahụ.
Enwere m olileanya na m nyeworo aka.
Dị ka m gwara Laura, ihe Linux a na-ewe ogologo oge. O nyere m otu ozi njehie ahụ dị ka nke gị ma adị m ka mmụọ nke Canterville site n'otu ebe ruo ebe ọzọ na enweghị ihe ọ bụla.
Onye isi m gwara m: "have nwere ụbọchị 2 iji chọta azịza ya, ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị na-alaghachi na windo."
ndewo, m nwere otu nsogbu m choro itinye igwe skype 4.0. na pclinuxOS m, ebudatara tar, gz2 na decompressed ma ruo ebe ahụ ka m nwetara, mgbe m mere. / hazie ọ na-agwa m na faịlụ adịghị adị .. ebee ka m furu efu ma ọ bụ gịnị? gwa m, na pclinuxOS (nke ikpeazụ ewepụtara version) skype arụnyere ma ọ bụ mbipute 2.2 na m chọrọ ịwụnye 4,
Ọ nwere ihe ọ bụla aghụghọ m ga-eme iji wụnye nke a n'ikpeazụ? ihe di na synaptik nke amaghim ???
Adị m ọhụrụ na usoro ihe a, agbalịrị m distros ndị ọzọ tupu oge niile ihe niile dị mma belụsọ maka nke a.
Ọ bụ m ka m chere na ọ nweghị onye maara ajụjụ ndị a.
Ndewo, o teela ị jụọla ajụjụ gị.
Ekwadoro m ka ibudata ụdị Skype kacha ọhụrụ maka Windows (R)
nakwa na ị na-eji Wine na-agba ọsọ ya na GNU-Linux distro.
Nnọọ! Enwere m otu nsogbu ahụ: Ejuru m ụdị ọhụrụ nke sọftụwia etiti ahụ na enxtension tar.gz na mgbe m rutere "./configure" dịka m nwetara njehie, dịka na "ime". KEDU IHE Ọ BỤ"?? Daalụ !! E wezụga software center egbochi nhọrọ iji wụnye !!!
Carlos Rivera onye nhazi ihe oyiyi dijo
Daalụ, ọ nyeere m aka nke ukwuu !!!!
Zaghachi Carlos Rivera
otú ike a igba egbe
Otu ajụjụ, ị nwere ike ịlele ndabere nke faịlụ tar.gz tupu ị rụọ ọrụ ./configure ???
Adị m ọhụrụ na Linux, ọ dị ka ihe siri ike ịwụnye mbadamba tar gz gz2 ma ọ bụrụ na m nweta ụgwọ ọ na-enweghị ndị na-adabere na ya na rpm ahụ ọ bụrụ na ọ bụ i586 ma ọ bụ i686 ma ọ bụ i386 na ihe kachasị njọ bụ na enweghị m ịntanetị n'ụlọ m. Hụ ọtụtụ okwu na-emegiderịta onwe gị na-agbagwoju gị anya.
ezi Ama, ma ụfọdụ * .tar.bz2 nchịkọta agbakọworị ma wụnye ha, ị ga-ewepụ ha na folda ọ bụla (ọkacha mma / họrọ ka ọ dị maka ndị ọrụ niile) ma mee ka ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na / usr / mpaghara / biini
Zaghachi gabriel yamamoto
Ezigbo nkọwa nke otu esi eji faịlị tar.gz. Daalụ nke ukwuu maka ozi a. Ekele m ndị otu niile
Ọ naghị arụrụ m ọrụ
cd / home / ju / downloads / icecat-24.0 ——-> Na-aza m
bash: cd: ulo / ju / nbudata / icecat-24.0: file ma obu directory adighi
kedu ihe m na-emehie ??? Sistemụ arụmọrụ bụ Voyager 14.04 LTS (xubuntu) Xfce desktọọpụ Gdebi adịghị na menu ọdịnaya ma ha abụghị synaptic mana ha nọ na menu mmalite, ọbụlagodi na ị mepee ha, ha anaghị amata nchekwa, ọ dị ka a ga-asị na ha adịghị. Ejiri m ya na folda ebe a na-ebudata ya.
Nkuzi a na aru oru na .tgz?
Ee e, .tgz bụ usoro nke Slackware na-eji ma ha agbakọọla, ma ibudatara ya ma ọ bụ tinye ya na slackbuild.
Iji wụnye ya ị ga-eji installpkg "aha ngwugwu".
Ndo ma ọ naghị edozi m nsogbu ahụ nke ukwuu maka m, mgbe ị na-ekwu. / Hazie ma anyị hazie ya, ị kwesịrị ịkọwapụta ihe, nri? ọ bụrụ na m tinye naanị. / hazie ya ọ gwara m
bash: ./configure: Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị
mgbe ahụ ị na-asị "anyị na-eme"
make: *** Onweghi ihe edeputara nke edeputara na onweghi ihe achọtara emere. Elu.
make: *** Enweghị iwu maka iwu "wụnye" ebumnuche. Elu.
Mgbe ahụ ị na-ekwu "anyị na-agba ọsọ mmemme"
Kedu ka m si mara nke bụ aha ma ọ bụ nke a ga-ewepụta ya? Ọ bụ ihe dị omimi, ma eleghị anya ị ga-eji ọtụtụ ihe ị ga-amata, ma ndị bịara ịhụ nkuzi nwere ike ọ gaghị ama
Zaghachi ka asdf
Anọ m na-enyocha ma njehie nke na-ebilite mgbe m na-enye ./configure bụ n'ihi enweghị usoro mkpokọta (olee otu anyị ga-esi chịkọta na-enweghị mmemme nke na-eme ya?). iwu ịwụnye nchịkọta na ịbanye bụ:
sudo ikike wụnye Mee-dị mkpa
ozugbo arụnyere, anyị na-aga na nchekwa ebe faịlụ a ga-decompressed bụ na-egbu:
tar -zxvf mmemme_name.tar.gz
Mgbe ahụ, anyị abanye na folda mmemme ahụ, ma ọ bụrụ na ebe ahụ anyị mezuo ./configure wee sudo mee ịwụnye
Echere m na enyerela m aka!
Ndo, echefuru m ịkọwapụta, n'ọnọdụ m ka m mee "mee" na "sudo apt-get install program" m ga-abanye na folda "base" n'ime folda ahụ egbochighị, ebe ahụ ka m weere iwu iji chịkọta ( Mee) na ntinye.
Ọ na-enye m nsogbu mgbe m na-eji eme ka ọ na-ekwu na ọ naghị achọta ihe ọ bụla iji wulie elu
Ndo, enwere m nsogbu a, m na - agba ọsọ na iwu a, ọ na - egosi m njehie ma enweghị m ike ịmepụta profaịlụ
desktọọpụ: ~ / Downloads $ tar -jxvf iReport-4.1.3.tar.bz2
tar (nwa): iReport-4.1.3.tar.bz2: Enweghị ike imeghe: Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị adị
tar (nwatakiri): A naghị eweghachite njehie: na-apụ ugbu a
tar: Nwa laghachiri ọnọdụ 2
tar: Emehie adighi eweghachite: ugbu a
Ezi ndi enyi,
Adị m ọhụrụ na Linux, agbanyeghị, enwere m obere nsogbu mgbe ọ bịara n'ịghọta ngwaọrụ nke bụ ihe na-agụ biometric dijitalụ, m googled ma o doro anya na achọtala ya, ọ na-ebudata na .tar.gz ndọtị, gbalịa Wepu ya na folda, ewepụrụ ọtụtụ faịlụ mana amaghị m ma ọ bụrụ na m gachaa ihe ọzọ ma ọ bụ mado faịlụ ndị ahụ agbachapụghị na folda na sistemụ, amaghị m, ọ bụrụ na ị nyere m aka biko, iji mee usoro ahụ nke ọma, ọ ga-abụ ekele dị ukwuu, enwere m Linux Debian 7 arụnyere na OS XNUMX. n'ọdịnihu na-ekele ma na-ekele gị nke ukwuu.
M na-eji Linex 2011 na Linex 2013 na nnukwu nsogbu m na-ahụ mgbe ị na-etinye ngwa bụ na ha anaghị ebu ha na ndepụta nke ngwa na otu ha (eserese, ọfịs, multimedia, wdg) ma ọ bụrụ na m chọrọ ịmepụta onye na-ebido amaghị m ebe M ga-aga chọta faịlụ launcher ngwa. Kedu folda ị mepụtara ya? Olee otú ime ya?
Mgbe etinyere ha site na ntinye ego nke ndị na-agbapụta ihe na-etinye na otu ha, enwere ike ịme nke a site na ịwụnye, tar.gz dị ka akọwara na weebụsaịtị a?
Zaghachi Rufo López Retortillo
Biko nyere m aka inwe sistemụ ọzọ akpọrọ lps 1.5.5 na enweghị m ike imelite mmemme ahụ
Biko gwa gi ozo enweghi m ike izopu faịlụ tar.bz2 Enwere m sistemu eji akpo lps 1.5.5 ma amaghi m otu aga esi eji ya, biko nyerem aka, ana m ekele gi ...
mgbe ịtọpụchara faịlụ bz2, iwu ahụ ./configure anaghị arụ ọrụ n'ihi na Ọ Baghị
Enwere m ubuntu 14.04LTS
ị mara dijo
Aghọtaghị m, na slax na .tar.gz na-aga sirima, mana na ubuntu enweghị m ụzọ m ga-esi chịkọta.
Zaghachi ka sapete
Kedu ihe kacha mma OS? OS kachasị mma bụ na ọ na-edozi nsogbu gị.
Ndị Linux dị ịtụnanya. Anọ m na-agbalị ịwụnye ZinjaI na LinuxMint arụnyere ọhụrụ m maka ọ dịkarịa ala awa 5.
M na-agagharị na ngalaba niile achọtara na ihe niile (mana ha niile, gụnyere nke a), ha na-enye gị ọkara ozi ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, emeghere m ọdụ ahụ, mana enweghị m ike itinye adreesị ebe faịlụ ebudatara dị (nke bụ / ụlọ / onye ọrụ / Ihe nbudata / zinjai).
Ihe m nwetara bụ njehie: "bash: cd: onye ọrụ: Enweghị faịlụ ma ọ bụ ndekọ dị otú ahụ.
Aghọtara m na ha chọrọ ịgbasa ma gbasaa ojiji nke sistemụ arụmọrụ, mana, ịgọnahụ ozi ma ọ bụ ịkọwa ihe niile na ọkara, naanị ihe ha ga-enweta bụ na, ndị ọrụ dị ka m, ndị nwere ebumnuche siri ike ịkwaga Windows na Linux, nyefee na rapara na W7 m, ihe ọjọọ mana ọ bara uru ma jikwaa ya.
PS: Gịnị ka onye na-enweghị nsogbu nwere ihe ngosi ihe osise mere ka ha mee? Kedu ihe kpatara taa na narị afọ iri abụọ, ka ha ga-aga n'ihu na-eji ihe yiri DOS arụnye obere mmemme? Mụ nwoke ... iji hụ ma ha bi obere ntakịrị ...
cd ~ / Downloads / nwụnye akwukwọ ụzọ.
Ndụmọdụ: rapara na windo. A na-eme sistemụ ọ bụla maka otu ụdị mmadụ. Emere Windows maka ndị na-ahọrọ ka e nye ha ihe niile na ala yana mbọ pere mpe ma m hụ na ọ bụ ikpe gị. Onwere ndi n’enweghi ike ichota ihe karie nke ozo, abia, nke ozo ... nabata. Nke ahụ adịghị njọ, naanị ihe anyị ga-eme bụ ịmata ebe ike anyị gwụ ma mee ha.
Ndụmọdụ ọzọ: Ọ bụrụ n ’ịmara naanị otu ihe esi enweta obi umeala ma jiri mkpụrụ okwu abụọ dịka“ biko. ” Ọ ga-eju gị anya. Na-eme ya mgbe mgbe.
Daalụ nke ukwuu maka nkuzi ahụ, ọ nyeere m aka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka nkwụnye wifi dwa-131.
Enwere m obere obi abụọ, emeela m ihe niile dịka ha na-ekwu n'elu.
Gaa faịlụ ụzọ, mee…. wee Mee, chere ka ọ gwụ ma wee wụnye.
Ruo mgbe nzọụkwụ ahụ enyeghị m njehie ọ bụla.
Ajụjụ m nwere bụ ịmata ma m etinyela ndị ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ na m ga-eme ihe ọzọ.
Juanzito .. gaa n'ihu ma nye Linux ohere, ihe ọbụla ikesa, ekpebiri m ịhapụ Windows 7 otu izu gara aga na m efuola karịa ọkụ mmụọ, hahaha, mana ịgụ ebe a na ebe a ị hụrụ ozi na-esiri gị ike oge ụfọdụ Iji ghọta, ihe niile dabere na mbọ onye ọ bụla chọrọ ịmụ ma pụọ ​​na njedebe ebe Windows na-etinye gị (ọ bụ m chere).
Otu ihe ... na Linux ọnụ, isi obodo gụọ. 😉
PS: M ga-eme ihe ọzọ mgbe Kame wụnye. ??
Ana m ekele gị nke ukwuu na ekele sitere na Canary Islands.
Na onye ị bụ ịgwa onye ọrụ ka ịlaghachi na X usoro? You chere Richard stallman?
Ekwenyere m na ihe ha na-ekwu na ụfọdụ OS na OS kachasị mma bụ nke sistemụ na-adaba na onye ọrụ na B NOTGH NOT ụzọ ọzọ.
Mụ onwe m n'anya Windows .exe n'ihi na dịka ị na-ekwu na ịkwesighi ịbụ onye ọgụgụ isi kọmpụta iji wụnye ihe dị mfe dịka akwụkwọ ederede dị mfe; tụnyere ebe a na Linux na ọ bụrụ na ọ bụghị na ngwa raara onwe ya nye sọftụwia ị ga-arapara na mgbagwoju anya nke narị afọ na mbadamba.
Abatara m ebe a na-achọ na ịhazi ozi iji wụnye mmemme na Linux ebe ọ bụ na m na-akwadebe ịwụnye mint na igwe na-arụpụta ihe ma amaara m na ọ bụrụ na akwadoghị m, agaghị m enwe ike ịwụnye ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ bụghị na nchekwa.
Ugbua ndi "biko" onye obula juo nsogbu a bu na onweghi onye na aza ha, ya mere na oge ufodu ndi mmadu gha agha iwe karia ikwu okwu nzuzu.
Zaghachi na Arcs
nwute .. mana m na-agbachitere iji sọftụwia na-emeghe ma na-emeghe .. M na-eji kọmputa eme ihe ruo afọ 30 .. na m bụ 37 ..
nsogbu bụ na n'ozuzu na Linux ọ zuru oke na onye ọ bụla chọrọ ma ọ bụ kwesịrị "mara" ntakịrị ihe maka ihe dị mfe dịka ịwụnye mmemme, mmelite ma ọ bụ ihe ọ bụla ... nsogbu ahụ bịara na ọtụtụ mmadụ kwesịrị ịrụ ọrụ ma jiri pc (na OS ọ bụla) iji rụọ ọrụ ọrụ ya kpọmkwem .. yabụ ọbụlagodi na ọ na-ewe 10 nkeji iji budata a .gz ma wụnye ya .. ma ọ bụ ọ bụrụ na ọtụtụ na-eme ọtụtụ awa ga-agabiga .. ha bụ nkeji ma ọ bụ oge awa nke enweghị ike rụọ ọrụ gị na nke ahụ bụ ebe ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwee ndidi ..
na nke m .. na-arụ ọrụ m na-eji Ubuntu nke bụ ihe arụnyere na ndabara na PC, ebe ọ bụ ebe sayensị, mana nke ahụ na-eme ka m nọrọ ọtụtụ awa na-anwa ịwụnye ma ọ bụ ọbụna ịkọwapụta otu esi eme nro a kapịrị ọnụ (dịka ọmụmaatụ abụ m geographer) ọ na-arụ ọrụ .. ma ọ bụ na mgbe ọ bụla melite ya .. weghachite ngwaọrụ niile n'ihi na ọkara kwụsịrị ịrụ ọrụ n'ime mmemme ..
na nke a kpọmkwem .. Achọrọ m ịhụ webinar / forum na-arụ ọrụ .. ma ebe ọ bụ na ha na-eji java, m na-atụ uche ihe ịrịba ama na m kwesịrị imelite ya .. ọ dị mma .. gaa na saịtị Java .. chọta faịlụ maka OS m, 14.04 .. lee nbudata na nwụnye "" ntuziaka "" .. budata a .gz ma site ebe ahụ gaa n'ihu .. unzip .. ok, na… ọ na - ekwu "wụnye" .. na voila .. naanị na ị nweghị ike ịme ihe ọ bụla Ama nke post a .. kedu ihe m ga - eme ozugbo m mepee «jre-blablabla nke ndụ m niile.gz»
nke a arụghị ọrụ nye m na distro ọ bụla
Zaghachi carlos fabian ferra
Ọ bụrụ na ọ rụghị ọrụ maka gị, ọ dị ọcha Layer 8.
Zaghachi Yank Carlos
Dịka m na-eji ya oge ụfọdụ, oge ọ bụla m batara ebe a ka m mara etu esi eme ya.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka idere ya na ka ị ghara ihichapụ ya ogologo oge.
Zaghachi Ignacio Navarro
dị ka ị pụrụ ịhụ na synaptic ọhụrụ ngwugwu arụnyere ma ọ bụrụ na ọ na-egosi na ị na ndị kasị ochie (mụ dị ka distro) ¿?
ihe niile na-aga n'ihu na-abịa mgbe ./configure ọ dịghị onye na-akọwa nke ọma maka mgbe ọ na-ekwu na faịlụ ahụ adịghị adị
Ana m anwa iwunye wifi si broadcom abughi ./configure, nor make or make install iṣẹ.
usoro ezi uche dị na 1e mezuo ./configure mana o doro anya na ntuziaka a na-ezo aka na nhazi nhazi ma mepụta ụfọdụ faịlụ tinye ebe ahụ, nke a kwesịrị ịbịakwute ngwugwu nke ebudatara na Broadcom mana m na ndekọ a adịghị ebe ahụ, ọ nke kwesiri ime nhazi bụ nlele ma mepụta faịlụ Makefile, mana mgbe ị na-emeghe ngwugwu ahụ achọpụtara m na etinyere Makefile, iwu abụọ ndị ọzọ na-eme ma wụnye anaghị arụ ọrụ maka m, ọ ga-abụ n'ihi na ụdị ọhụrụ nke elementrị os anaghị akwado ya freya dabere na ubuntu 14.04
Eziokwu? Usoro a arụbeghị ọrụ m ma m na-ahọrọ mgbe niile .deb ngwugwu ma ọ bụ iwu si Terminal ... Ọ dị njọ na ọ nweghị ihe doro anya iji wụnye .tar.gz
Eziokwu? Usoro a enyerebeghị m aka ma m na-ahọrọ mgbe niile .deb ngwugwu ma ọ bụ iwu si Terminal ... Ọ dị njọ na ọ nweghị ihe doro anya iji wụnye .tar.gz
Kedu ihe kpatara nkuzi a anaghị emelite? Ka obu ha na eme ohuru?
Onye ọ bụla nọ ebe a na-eme mkpesa na ọ naghị ejere ha ozi ma na ọ nweela afọ ya….
EKỌT MATOS dijo
Ndewo, achọrọ m enyemaka, na nke ahụ iji wụnye nchịkọta .. Enwere m mbipute Ubuntu 15 .. ihe .. Achọrọ m ịwụnye adobe flash plugin, n'ihi na ọ bara ezigbo uru ịwụnye ya, ebe ọ bụ na adobe flash m nwere ike tinye ụfọdụ ibe weebụ, ebe ị nwere ike ịhụ TV ma geekwa redio .. biko ị nwere ike zitere m nkuzi nkuzi nke ukwu .. Enweghị m nnukwu ahụmịhe na usoro iwu ahụ bụ ịsị jiri ọnụ.
Ndewo onye obula !!! Mgbe m guchara ihe niile kwuru, achọrọ m akwụkwọ ntuziaka linux na ọ bụ ya.
Enyi OCELOTE, nabata nkatọ a, site n'echiche m dị ala ma bụrụ nke na-enweghị isi nke m na-ekerịta na ọtụtụ nde ndị ọrụ Windows:
Ọ ga-amasị m ịgbanwe na linux! ma ọtụtụ n'ime anyị na-ahụ na ọ gaghị ekwe omume, n'ihi gịnị? I nwere ike iche ... n'ihi na m na kọmputa bụ ihe m ga-arụ ọrụ m, ọ bụghị njedebe ... amaghị m ma ọ bụrụ na ị ghọtara ihe anyị niile chọrọ (na JUANZITO agwala gị nke ọma) ọ bụ sistemụ arụmọrụ na-enyere anyị aka iji rụọ ọrụ anyị, enweghị m oge iji mụta otu esi eme ihe ndị bụ isi dịka ịwụnye mmemme site na njikwa ahụ, ihe niile kwesịrị ịdị nro na mfe ... Dịka onye ọchụnta ego m ga-agwa gị na njikwa ị na-ebu Linux bụ ọdachi, kama inyere ndị mmadụ ime mgbanwe nke sistemụ ị na-ekwusi ike na ndị mmadụ na-edina na ihe ndị na-enweghị mmasị na ha ma ị na-egbochi mgbanwe ahụ n'onwe gị ... ọ na-emetụ imi m aka imeghe njikwa maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile.
Stamina DOS 6.22 ochie !!
Zaghachi ka defcon
Tinye gị ka ị mụọ ihe ma hapụ ihe ahụ wuendos na-arụ maka ụfọdụ maka na ha na-etinye ya dị ka mkpịsị ugodi, ha anaghị akwụ ụgwọ ha, ka elu ya niile, ndị mere igodo ndị ahụ bụ linin ndị Linux ma ha kwesiri, nke ahụ bụ ihe kpatara Are dị ka onye nzuzu na-ekwurịta banyere mamahuevadas, nye ndị ọchụnta ego m na-agwa ha, nọgidenụ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ikike ha ma ọ bụrụ na ihe ha chọrọ bụ nke a kwụsiri ike yabụ, ha na-emeri oge ihe ọkụ mmụọ ha na-ede assholes na tutos ndị a bụ nke anyị bụ ndị na-amasị Linux assholes… .. finger po ace
Zaghachi ka o ghara ikwusi
Ọ bụghị ihe doro anya maka ndị ọrụ novice. Dịka ọmụmaatụ ị na-ekwu:
«Nke mbụ anyị na-aga na nchekwa ebe anyị nwere faịlụ ahụ, ọ bụrụ na folda ahụ nwere ọtụtụ okwu anyị ga-etinye ha na“ ”ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ naghị achọ nchekwa na okwu ọ bụla» ...
onye ọrụ ọ bụla ga-abanye na folda ndị a na «onye nyocha», ma ga-edegharị aha n'amaghị aha folda ahụ nwere ya na akara ngosi. Nke ahụ site n’echiche na ị gụrụ ya, «site na echiche nke onye ọrụ novice.
Mgbe ahụ ị na-etinye:
cd folda ebe faịlụ dị
CD "folda ebe faịlụ ahụ dị"
Site na mgbe ahụ, onye ọrụ ahụ abanyela n'ígwé ojii ma ọ bụ ebe ọ bụla, n'ihi na site ugbu a gaa na ọ furu efu na CD na acronym, ị gaghị akọwapụta otu esi esi ebe ahụ, ihe nzọụkwụ site na mmalite, malite na ihe niile ... na-emepe njikwa mbụ .
Maka HECTOR MATOS: Ihe mgbakwunye adobe, java, na ndị ọzọ adịghị mkpa iji aka gị mee, naanị ị ga - ejikọ na ịntanetị ruo oge ụfọdụ, yana na njikwa njikwa ọ ga - apụta na - akpaghị aka, site na ebe ahụ, a ga - emelite ya na akpaghị aka, maka Firefox Opera, na ndị fọdụrụ nọọrọ onwe ha ... ejikari na obubata na-esote elekere na mmalite mmanya, na ọtụtụ distros m hụrụ na ndabara ọ bụ n'ebe ahụ, Amaghị m ma ọ ga-adị ka nke ahụ na ha niile.
Biko kwupụtakwuo, ọtụtụ ozi na-efu
gbalịa imelite Python na 3.x na ime ntinye na ngwụcha na-agwa m na enwere mperi:
zipimport.zipimporterror enweghị ike decompress data zlib adịghị adị mee ka *** wụnye njehie
Mgbe ịtọsịrị ka ị wee gbaa ọsọ. / Hazie ọ dị mkpa iji tinye ndekọ ahụ unzipped, ma ọ bụghị na ọ naghị arụ ọrụ. M na-eji KDE wee jiri eserese banye na folda nke m meghere ma ebe ahụ emepere m ọnụ iji mepụta "mee" mana ọ naghị arụ ọrụ ...
Enwere m ajụjụ, m nwetara nke a:
manolo @ mxlolo-satellite-c655d: ~ / Desktọpụ $ ./configure –help
bash: ./configure: Enweghị faịlụ ma ọ bụ ndekọ dị otú ahụ
ihe m na-eme…?
Ọ dị mma ruo mgbe. / Nhazi nke bọọlụ pụta.
G DON DO KA I putara na! Ha anaghị akọwa ya, Achọrọ m ịwụnye ndụ fucking nke abụọ xddd
bash: / home / katsoda / Downloads / Second_Life_5_0_4_325124_i686 / configure: Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị adị »» »
M ka mma ibudata Windows 10 ma were ịnyịnya ibu. (?)
Ọfọn, mba. Mana nke a bụ otu n’ime ihe m kpọrọ asị banyere Linux. Installwụnye, na ikpe ekpere ka mmemme ndị kachasị amasị gị dakọtara ebe a bụ nnukwu ihe ịma aka.
Ghara inye nsogbu, ndi nwoke, ma onye okike nke nkuzi a kọwara n’uche n’ụzọ zuru oke ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na inwetara mhiehie. / Hazie ya.
Achọpụtara m na ọ dị ịtụnanya na ọtụtụ mmadụ na-eme mkpesa na ọ naghị akọwa ihe mgbe ị na-akwụsịbeghị ịgụ.
Ọfọn, ana m ekwupụta na m enweghị ike maka ụdị faịlụ a. Ana m agbalị ịwụnye java na nke a bụ ihe ọ bụ;
Javier @ elu: ~ / JAVA / jre1.8.0_151 $ tar -zxvf jre-8u151-linux-x64.tar.gz
tar (nwa): jre-8u151-linux-x64.tar.gz: Enweghị ike imeghe: Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị
na Linux ubuntu 18.04.01 lts ị ga -pịnye ./name nke usoro ihe omume n'ime otu folda ahụ mgbe ịpịpụrụ ya na voila !!!
Zaghachi Roger Deku
Ezigbo mma, ọ bara ezigbo uru.
na av Linux nke a anaghị arụ ọrụ
Amaghị m ihe dị ịtụnanya; ma ọ bụ oge ọ bụla ị wụnye distro ị malitere ụzọ obe
i hu etu kiiboodu si aga
Zaghachi ka emerson Goncalez
Ndewo onye ọ bụla, ana m eji Ubunto 20 wee lelee ihu akwụkwọ a iji wụnye nyocha nke Epson L4150 http://support.epson.net/linux/en/imagescanv3.php?version=1.3.38#ubuntu).
M gbasoro usoro ndị ahụ ma jiri 'tar -zxvf filename.tar.gz', mgbe m na-emeghepu m
'$ cd imagescan-bundle-ubuntu-20.04-3.63.0.x64.deb', nke bu folda emeputara.
N'ime nchekwa m jiri './install.sh', nke dị ka iji './configure', sistemụ ahụ jụrụ m paswọọdụ m na ihe niile arụnyere nke ọma.
Agbalịrị m nyocha m ma ọ dị mma, ekele maka inye m ntụziaka ahụ, enwere m ike iji nyocha m
Zaghachi José Félix Paisano Morales
Kedu ka esi tụọ arụmọrụ CPU nke VPS?
Wụnye Line Messenger na Linux na Mmanya